Adɔde Nan | Wɔbɔe Anaa?
ADƆDE bi wɔ po mu a ɛte sɛ nworaba (barnacles). Otumi fam abotan, nnua, anaa po so ahyɛn ho denneennen. Nsonsonoe a ɛwɔ adɔde ne nworaba ho ne sɛ, adɔde wɔ nan nteaanteaa bi a ɛte sɛ ahama. Sɛ wohwɛ sɛnea ne nan no te ne sɛnea ɛma odi ahim wɔ po ase no a, wobɛka sɛ po asorɔkye no bɛhohoro no akɔ. Nanso ɛboa no ma ɔpɛ aduan na ɛma otumi kɔ baabiara wɔ po ase. Dɛn na ɛwɔ ne nan no mu a enti asorɔkye bɔ koraa a, entumi nhohoro no nkɔ?
Susuw ho: Adɔde nan ayɛ sɛ ahama bi a ɛsensen hɔ na otumi twetwe mu. Nyansahufo kyerɛ sɛ, ne nan no fã kɛse no ara yɛ den, nanso baabi kakra yɛ mmerɛw. Sɛnea ne nan no te nti, sɛ ɔfam biribi ho a, ɛyɛ den sɛ ɔbɛwae. Ɛno nti ɛpo asorɔkye bɔ no sɛ dɛn mpo a, otim nea otim.
Nea nyansahufo ahu afa aboa no ho no, Ɔbenfo Guy Genin kaa sɛ ɛyɛ “nwonwa paa.” Ɔtoaa n’asɛm no so sɛ, “Nea ɛyɛ no nwonwa koraa ne sɛnea aboa no nan sensɛn hɔ no.” Nyansahufo gye di sɛ wobetumi ahwɛ adɔde nan nteaanteaa no so ayɛ nneɛma bebree. Ebi ne nneɛma a yɛde fomfam dan ne po ase hyɛn ho. Sɛ wɔreyɛ obi oprehyɛn nso a, ɛbɛkyerɛ wɔn sɛnea wɔde ntini bɛfam dompe ho. Afei wobehu sɛnea wɔbɛka nnipa honam asi ani yiye. Ɔbenfo J. Herbert Waite nso kyerɛ ade wɔ University of California, Santa Barbara, U.S.A. Ɔno nso kaa sɛ, “Wohwɛ nneɛma a ɛwɔ po mu a, ɛboro adwene ne ntease so. Ɛba sɛnea yɛka biribi si biribi anim a, biribiara ne aboa yi deɛ nsɛ.”
Wususuw ho sɛn? Wohwɛ sɛnea adɔde nan te a, wugye di sɛ ɛno ara na ɛbae anaa obi na ɔbɔɔ no saa?